» चर्चित प्रतियोगीहरु नै आउट
चर्चित प्रतियोगीहरु नै आउट
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १८ साउन । नेपाल स्टारको दोस्रो राउण्ड षडज राउण्डबाट १५ जना प्रतियोगीहरु बाहिरिएका छन् । षडज राउण्डको पहिलो भागमा प्रतिस्पर्धा गरेका २७ जना मध्ये १२ जना तेस्रो राउण्डका लागि छानिएसँगै १५ जना प्रतियोगीहरु बाहिरिएका हुन् । यी १५ प्रतियोगीहरुले अडिसन राउण्डमा निर्णायकहरुको मन जितेर दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका थिए । उनीहरुले दोस्रो राउण्डमा पनि निकै राम्रो प्रस्तुति दिएका थिए । तर शोमा जसरी भएपनि केही प्रतियोगीहरुलाई छनौट गरेर अगाडि लानुपर्ने बाध्यता भएका कारण नेपाल स्टारले यी १५ जना होनहार प्रतियोगीहरुलाई गुमाएको हो । चर्चित प्रतियोगीहरु नै बाहिरिँदै गएपछि शो थप रोचक मोडमा पुगेको छ । यस भिडियो सामग्रीमा हामी तिनै १५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा अनि उनीहरुको सांगितिक यात्रामा संघर्षका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । प्रतियोगिताका अन्य प्रतियोगीहरुबारे जान्न हाम्रा च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट–
१) दामोदर बस्नेत–नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको पहिलो आवाज हुन् दामोदर बस्नेत । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका दामोदरले दोस्रो राउण्डमा प्रेमध्वज प्रधानको ‘घुम्तीमा नआऊ है’ बोलको गीत गाएका थिए । राम्रो गीत गाएका उनलाई नेपाल स्टारले गुमाएको छ । दाङ निवासी दामोदर अहिले ईमाडोलमा बस्छन् । उनी अध्ययनका साथै सहकारीमा पनि कार्यरत छन् ।
२) फुर्बा लामा–नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको दोस्रो आवाज हुन् फुर्बा लामा । दोस्रो राउण्डमा नाईन्टिन सेभेन्टी फो एडीको ‘सम्बोधन’ बोलको गीत गाएका उनको प्रस्तुतिलाई निर्णायकहरुले पनि मन पराएका थिए । तर उनलाई पनि नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको छ । उनी पोखरा अडिसनबाट छानिएका थिए । सानैदेखि सांगितिक परिवारमा हुर्किएका फुर्बा पोखरा निवासी हुन् । आर्थिक अभावले पनि आफ्नो संगीत यात्रालाई रोक्न नसकेको बताउने फुर्बाले सानैदेखि ठूलाले गाएको देखेर गीत सिकेका हुन् । विवाहपश्चात पनि निरन्तर संगीत क्षेत्रमै सक्रिय भएका फुर्बा संगित क्षेत्रबाटै केही गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् ।
३) मानव परियार–नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको तेस्रो आवाज हुन् मानव परियार । पोखरा अडिसनबाट रकिङ प्रस्तुति दिएर निर्णायकको मन जितेका उनले दोस्रो राउण्डमा एड्रियन प्रधानको ‘सम्झनामा’ बोलको गीत गाएका थिए । यसपटक निर्णायकहरुले उनको प्रस्तुति सोचेको जस्तो नभएको बताएका थिए । जसका कारण एउटा मिठो आवाजलाई नेपाल स्टारले गुमाएको छ ।
४) सन्दिप सुनुवार–नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको चौथो आवाज हुन् सन्दिप सुनुवार । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका उनले दोस्रो राउण्डमा मन्त्र ब्याण्डको ‘सधैँ सधैँ’ बोलको गीत गाएका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा लुक्सका कारण पनि चर्चा पाएका सन्दीपले प्रस्तुति पश्चात पनि प्रशंसा बटुलेका थिए । उनको प्रस्तुति पश्चात तिनै जना निर्णायकले उनको प्रशंसा स्वरुप ताली बजाएका थिए । तर यति धेरै प्रशंसा भएपनि उनी तेस्रो राउण्डका लागि भने छानिएनन् । विभिन्न सांगितिक कार्यक्रममा समेत व्यस्त भईरहने सन्दिप सांगितिक क्षेत्रमा चम्कँदै छन् ।
५) विशाल कुँवर–नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको पाँचौँ आवाज हुन् विशाल कुँवर । धनगढी अडिसनबाट छानिएका उनले दोस्रो राउण्डमा प्रमोद खरेलको ‘म बाँचेकै’ बोलको गीत गाएका थिए । राम्रो गीत गाएता पनि उनी शोबाट बाहिरिएका छन् । टिकापुर कैलालीका विशालले यसअघि पनि केही सांगितिक प्रतियोगिताहरुमा भाग लिएका थिए ।
६) मीना नेपाली–नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको छैटौँ आवाज हुन् मीना नेपाली । उनले दोस्रो राउण्डमा रिमा गुरुङ होडाको आवाजमा रहेको ‘कसको आँखा लाग्यो बरै’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । सुमधुर आवाजमा गीत गाएकी उनी तेस्रो राउण्डमा पुग्नबाट बञ्चित भएकी छिन् ।
७) नकुल कार्की– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको सातौँ आवाज हुन् नकुल कार्की । सुर्खेत अडिसनबाट छानिएका उनले दोस्रो राउण्डमा गायक मिङ्मा शेर्पाको ‘अब हाम्रो बेला’ बोलको गीत गाएका थिए । आफ्नो प्रस्तुतिबाट निर्णायकहरुलाई प्रभावित पार्न सफल भएका नकुललाई निर्णायकहरुले ताली बजाएर प्रशंसा गरेका थिए । उनको प्रस्तुतिले गायक ईश्वर गुरुङको याद दिलाएको भन्दै निर्णायक रामकृष्ण ढकालले उनको प्रशंसा गरे । तर उनी तेस्रो राउण्डका लागि छानिएनन् । अडियो कोअर्डिनेटर, गायक, संगीतकार र रेकर्डिष्टको पहिचान बनाउँदै गरेका नकुल संगीत क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उनका केही चर्चित गीतहरुपनि बजारमा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
८) आठौँ प्रतियोगी– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट आठौँ आवाज पनि गुमाएको छ । उनले दोस्रो राउण्डको सोह्रौँ नम्बरमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले ‘कोमल त्यो तिम्रो बदनमा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिपश्चात सम्भावना राम्रो भएको भन्दै उनको ल्याण्डिङ नोटहरुमा ध्यान दिनुपर्नेमा निर्णायकहरुले जोड दिएका थिए ।
९) सगुन आङ्देम्बे लिम्बु– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको नवौँ आवाज हुन् सगुन आङ्देङ्बे लिम्बु । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका सगुनले दोस्रो राउण्डमा गायक सुनिल बर्देवाको ‘गोरेटो अनि’ बोलको गीत गाएका थिए । आफ्नो प्रस्तुतिबाट निर्णायकको मन जित्न सफल सगुनले मिठो गाएको भन्दै निर्णायकहरुले ताली बजाएका थिए । तर उनी तेस्रो राउण्डका लागि भने छानिएनन् । विभिन्न सांगितिक कार्यक्रमहरुमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाउने सगुनका केही अफिसियल गीतहरु पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनी आफ्ना कभर तथा मासप गीतहरुका कारण पनि चर्चामा छन् ।
१०) रञ्जन सोताङ राई– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको दशौँ आवाज हुन् रञ्जन सोताङ राई । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका उनले दोस्रो राउण्डमा जगदिश समालको आवाजमा रहेको ‘म त मर्छु क्यारे’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुति पछि निर्णायकहरुले उनलाई रियाज बढाउन सल्लाह दिएका थिए । ताप्लेजुङ जिल्ला निवासी रञ्जन हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्छन् । ७ वर्षदेखि गीत गाउन सुरु गरेका रञ्जनले विभिन्न सांगितिक क्षेत्रमा सहभागी हुने मौका पाएका थिए । विभिन्न गायकहरुको आवाज हुबहु निकाल्ने खुबी भएका रञ्जनका विभिन्न गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेका छन् ।
११) सञ्जय लिम्बु– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको एघारौँ आवाज हुन् सञ्जय लिम्बु । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका सञ्जयले दोस्रो राउण्डमा नारायण गोपालको आवाजमा रहेको ‘यति चोखो यति मिठो’ बोलको गीत गाएका थिए । निकै सुमधुर प्रस्तुति दिएका सञ्जय झापा निवासी हुन् । उनी पनि तेस्रो राउण्डका लागि छनौटमा परेनन् ।
१२) रिवाज घतानी– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको बाह्रौँ आवाज हुन् रिवाज घतानी । धनगढी अडिसनबाट छानिएका उनले दोस्रो राउण्डमा नेपथ्य ब्याण्डको यो जिन्दगानी बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा निर्णायकहरु सकरात्मक देखिएका थिए । तर उनी पनि तेस्रो राउण्डका लागि छानिन सकेनन् ।
१३) सुमन ठकुरी– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको तेह्रौँ आवाज हुन् सुमन ठकुरी । सुमनले दोस्रो राउण्डमा द एज ब्याण्डको ‘तिम्रो जीत मेरो हार’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी पनि दोस्रो राउण्डका लागि छनौट हुन सकेनन् ।
१४) नरेन्द्र बिक– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको चौधौँ आवाज हुन् नरेन्द्र बि.क । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका नरेन्द्रले दोस्रो राउण्डमा भक्तराज आचार्यको ‘जहाँ छन् बुद्धका आँखा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा केही कमेन्टहरु समेत गरिएको थियो ।
१५) विश्वशान्त राई– नेपाल स्टारले दोस्रो राउण्डबाट गुमाएको पन्ध्रौँ आवाज हुन् विश्वशान्त राई । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका उनले दोस्रो राउण्डमा गायक रामकृष्ण ढकालको ‘तिम्रो आगमनले’ बोलको गीत गाएका थिए । धरान निवासी विश्वशान्त विभिन्न सांगितिक जमघटहरुमा व्यस्त हुने गर्छन् । उनका केही ओरिजिनल गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेको छ । उनी अभिनय र नृत्यमा पनि सोखिन छन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।